» मिस वर्ल्ड भोटिङ अपडेट–भोटिङमा मिस नेपालको अवस्था कस्तो छ ?
मिस वर्ल्ड भोटिङ अपडेट–भोटिङमा मिस नेपालको अवस्था कस्तो छ ?
हेटौँडा, ७ मंसिर । सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई खुशीको खबर, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले मिस वर्ल्डको भोटिङमा सबैलाई उछिन्दै मिस वर्ल्डको क्वाटरफाईनलमा अर्थात उत्कृष्ट ३० मा पुग्ने बलियो सम्भावना देखाएकी छिन् ।
यस अघि निराशा मात्र हात लागे पनि नेपालले पहिलो पटक ६८ औं मिस वर्ल्ड प्रतियोगितमा आएर पाँच शिर्षक मध्ये कम्तिमा पनि कुनै एक विधा तथा मिस वर्ल्ड नै जित्ने सम्भावना बढेको हो । भोटिङका आधारमा हुने मल्टिमिडिया अवार्डमा अहिलेसम्म श्रृङ्खला नै अगाडि छिन् । उनलाई जिताउन सबै नेपालीहरु लागिपर्ने हो भने मिडिया अवार्ड जित्दै उनलाई उत्कृष्ट ३० पुग्न कसैले रोक्न नसक्ने सम्भावना छ ।
हेरौँ भोटिङको भिडियो–
मकवानपुरको हेटौँडामा जन्मिएर मिस नेपाल बन्दै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी श्रृङ्खला २३ वर्षकी छिन् । उनका पिता सांसद विरोध खतिवडा र आमा सांसद मनु सिग्देल हुन् । ५ फिट ७ इन्च उचाई भएकी श्रृङ्खलाले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आर्किटेक्चर पढेर २०७३–७४ को ब्याच समेत टप गरेकी छिन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय श्रृङ्खलालाई विश्वमा नै मिस वर्ल्डको दाबेदारहरुको सूचिमा राखिएको छ ।
चीनको सान्यामा आगामी ८ डिसेम्बरमा मिस वर्ल्डको फाइनल इभेन्ट हुनेछ । मिस वर्ल्डमा पाँच शीर्षकमा अवार्ड वितरण गरिन्छ, जसमध्ये मल्टिमिडिया एउटा हो । यसअघि नै फ्रान्सकी माइभा कोउके टप मोडलको प्रतिस्पर्धामा पहिलो भएर क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरिसकेकी छिन् ।
मल्टिमिडिया अवार्डका लागि २८ नोभेम्बरसम्म भोटिङ खुला रहनेछ । क्वार्टरफाइनलमा विभिन्न तरिकाबाट प्रवेश गर्ने ३० जना सुन्दरीहरुबीच अन्तिम इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यहाँ निर्णायकहरुको मतका आधारमा मिस वर्ल्ड छानिने छ ।
मल्टिमिडिया अवार्डका लागि श्रृंखलालाई मोबस्टार एप, मिस् वर्ल्डको अफिसियल वेबासाईट र मोडल पावरको वेबसाईटबाट भोट गर्न सकिन्छ । साथै उनको आधिकारिक प्रतियोगी पेजमार्फत पनि लाईक गरेर भोट दिन सक्नुहुन्छ । यी ४ तरिकाका बारेमा हामीले अर्को भिडियोमा चर्चा गरेका छौँ ।
यो भिडियो तयार पार्दासम्म मोबस्टारमा उनी पहिलो र्याङ्कीङमा छिन् । साथै उनी २३.५२ प्रतिशत भोट ल्याएर पहिलो स्थानमा छिन् । त्यस्तै बङ्गलादेशकी जन्नतुल फेरडसले ९.७५ प्रतिशत भोट ल्याएर दोस्रो स्थानमा छिन् । त्यस्तै फिलिपिन्सकी कटारिना रोड्रीगेजले ५.६१ भेट ल्याएर तेस्रो स्थानमा छिन् । मिस वर्ल्डमा यस वर्ष १ सय २१ देशका सुन्दरीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । मिस वर्ल्ड सर्वाधिक प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय सुन्दरी प्रतियोगिता हो । बेलायतका एरिक मोर्लीले सन् १९५१ मा यसको सुरुवात गरेका थिए । सन् २००० मा उनको मृत्युपछि उनकी पत्नी जुलिया मोर्लीले यो प्रतियोगिता अघि बढाइरहेकी छिन् ।